kumaa ah lamaanaha noloshaada aad ku halayn karto? Ama Aad Ku Aamini Karto | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
kumaa ah lamaanaha noloshaada aad ku halayn karto? Ama Aad Ku Aamini Karto
kumaa ah lamaanaha noloshaada aad ku halayn karto? Ama Aad Ku Aamini Karto Hanoqdo Mid Laga Hello Qodobada Hoosku Xusan…….
Qofka waa in aan ku qiimeeynaa wanaagyada maldahan ee
dabeecadda maxaa yeelay iyadaa ah midda sida saxda ah u go’aamineysa sida uu qofka isaga iskula macaamili doono, adiga uu kugula macaamili doono, carruurtiinuna hadhow ula macaamili doono.
Sidoo kale wanaagyada maldahan ee dabeecadda ayaa ah aasaaska xirriir kasta oo uu dadka wadaago, waxaana jira wanaagyo lagu qiimeeyo qofka aad nolosha la wadaageysid, kuwaasoo aan ku soo koobeyno shantan qodob:-
3. Dareen mas’uulnimo: Xabiibkaaga ama xabiibtaada waa in ay noqotaa qof u bisil in ay iyada is daryeesho adigana ku daryeesho. Mas’uulnnimadu waa in qofka uu ka fekaro nolosha iyo dareenka inta uu mas’uulka ka yahay.
4. is qiimeeyn sarre: Xabiibkaaga waxaa uu ku jeclaan karaa inta uu isaga is jecel yahay. Qaladka ugu weyn ee aan sameeyno marka aan xabiib ama lamaane dooraneyno waa inagoo xoogga saarna ilaa inta uu qofku na jecel yahay iyo sida uu noola dhaqmo, balse inaga ma eegno sida uu isaga iskula dhaqmo. Haddaba, xabiibkaaga is qiimeyntiisa marka uu sii kordhiyo xirriirkiina waa uu xoogeystaa.
5. Fekrad suggan: Lamaanayaasha rajada fiican nolosha ku leh waa dad ay ka buuxaan hamiyo wax ku ool ah iyo waxqabadyo waxtar leh. Haddii qofka nolosha uu ka fiiriyo dhanka fiican waa lamaanaha kuu horseedi kara nolol farxad iyo reyn reyn leh, isagaas ayaana ah lamaanaha aad ku haleyn karto noloshaada.
waxaa idiin diyaariyey (qalbijaceyl) kala xariir
sheekadii taxana inoo aheyd ( nabar aan dawoobeyn) Jaceyl:Maxaad Ka Taqaan Jaceylka?Waa maxay jaceyl?